Xalka kaliya ee dhibaatada taraafikada ee wadooyinka Batman TCDD - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia72 BatmanXalka kaliya ee dhibaatada taraafikada ee wadooyinka Batman TCDD
Xalka kaliya ee dhibaatada taraafikada ee wadooyinka Batman TCDD
15 / 01 / 2020 72 Batman, tareenka, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
xalka kaliya ee dhibaatada taraafikada jidadka taahley ee tcdd
Kuxigeenka Duqa magaalada Batman Zeki Hedekoğlu ayaa sheegay in xirmooyinka TCDD ee magaalada u kala qeybiya laba fursad u yihiin Batman: tek Xalka kaliya ee dhibaatada taraafikada ee Batman waa isticmaalka taraafikada TCDD. Waxaan rabnaa inaan hirgalinno nidaamka tareenka anagoo adeegsanayna marinnadaas '.
Dowladda Batman waxay dooneysaa inay hirgaliso nidaam gaadiid oo 'light train' ah si loo fududeeyo gaadiidka magaalada. Kuxigeenka Duqa Magaalada Zeki Hedekoğlu ayaa xustay in mashruucu uu kujiro marxalada diyaarinta: “Xitaa waxaa jiray ololeyaal loogu talagalay in magaalada looga saaro rakaabka TCDD. Si kastaba ha noqotee, waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysanno biraha loo kala qeybiyay magaalada si loo fududeeyo gaadiid. Mashruucu wuxuu ku socdaa diyaar garow. Waxaan ka fileynaa taageero laga helo dhammaan dhaqdhaqaaqyada magaalada ee xaqiijinta mashruucan. Tusaale ahaan, Adana, nidaamka tareenka nalka waxaa laga dhisay xoq. In kasta oo ay ku kacday ku dhawaad ​​1 bilyan oo doollar, danta la filaayey ma jirin. Batman, mashruucu wuxuu ku gaari doonaa qiimo jaban. Ujeeddadan awgeed, waxaan ka codsanay ballan ka socda TCDD Malatya 5-ta Agaasime Goboleed waxaan rabnaa inaan hirgalinno mashruucan.
ISKUULADA SOO IIBSASHADA
Madaxweyne ku xigeenka Hedekoğlu, mashaaricda cusub ee loogu talagalay gaadiidka magaalada ayaa sidoo kale soo jiitay hirgelinta. Hedekoğlu wuxuu sheegay inay bixiyaan 2 bas oo dheeri ah si loogu adeego muwaadiniinta, oo 10 kamid ah ay yihiin bilooyin. Tusaale ahaan, waxaan ku sameyn doonnaa joogsiyo caqli leh meelaha qaarkood. Waxaan ka eegi doonaa shaashadda inuu basku imaan doono daqiiqado yar oo sugitaanka baska joogsiga. Kadib waxaan horumarin doonnaa nidaamkan. Waxaan hiigsaneynaa inaan gaarno 80 boqolkiiba mashruucan. Gaadiidka sicir-dhimista ee aan ku bilownay ardayda sanadka cusub sidoo kale waa dan weyn. Waxaan isku dayeynaa inaan xalinno nidaamka isqorista billaha ah. Tan iyo bilowgii Janaayo, waxaan qaadnay 13 kun rakaab ah. ”(Reşat Yiğiz ğ- Batmançağdaş)
Xalka dhibaatada gaadiidka ee gawaarida Gebze
Xalka dhibaatada gaadiidka ee Konya
Xalka dhibaatada gaadiidka ee nidaamka tareenka ee Bursa
Dakhliga ku saabsan dhibaatada gaadiidka ee Sakarya lama gooyo Island Express
Kartepeliler waxay waydiisatay TCDD inay xalliso dhibaatada dhulka
Wasiirka Suat Kılıç, oo ah murashaxii Istanbul ee ciyaarihii Olambikada 2020, Oyun
Mashruuca Tareenka kaliya ee Codka kaliya ee ka socda Mashruuca Ganacsiga Samsun Sarp
Binali Yıldırım ayaa sharaxaad ka bixiyay mashaariicda ka jirta İzmir
Dib-u-eegis shakhsi ahaaneed
Mashruuca Nidaamka Nidaamka Tareenka Batman
Dhibaatada taraafikada ee Batman
Agaasinka Gobolka TCDD.Malatya